Torohevitra fanatsarana finday mahomby 5 maharesy anao mpanjifa | Martech Zone
Ity misy tidbit ny fahalalana mifandraika: 52 isan-jato ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala manerantany dia avy amin'ny smartphone. Miakatra be ny isan'ireo olona mampiasa telefaona finday. Eo no ahitan'ny ankamaroan'ny olona ny vokatrao na serivisinao.
Tsy misy isalasalana ny amin'izany.
Saingy raha tsy misy vahaolana tranonkala finday intuitive sy voalamina tsara ho an'ny orinasanao, sarotra ny mifaninana amin'ny hafa. Ao amin'ny orinasa e-varotra, ohatra, dia hita izany 55 isan-jaton'ny mpanjifa no nanao ny fividianany rehefa nahita ny vokatra tamin'ny alàlan'ny findainy izy ireo.
Aza diso anjara! Ireto misy torohevitra 5 mahomby amin'ny fanatsarana finday hampiakarana ny tahan'ny fiovam-ponao.
1. Ny haingam-pandeha mamaky tranokala no laharam-pahamehanao
Tsy maninona ny hafainganam-pandeha raha ny amin'ny tranonkala finday.
Raha ny tena izy, fikarohana ireo tranonkala finday izay mitondra 5 segondra na haingana dia mety hiteraka varotra avo kokoa noho ireo izay miadana kokoa. Tsy zakan'ny tompon-tany amin'ny Internet ny hafainganam-pandehan'ny entana. Heverina ho fanozonana amin'ny tranokalan'ny findainao izy io.
Soa ihany fa afaka manao fomba maro hanamboarana ity olana ity ianao.
Ahenao ny add-ons amin'ny findainao. Ny isan'ny fangatahan'ny mpizara amin'ny tranokalanao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny hafainganam-pandehany. Mampiasa mpanaraka na fitaovana fandinihana marobe ve ianao? Topazo maso ny atin'ny rindrambaiko; mety hahita ny olana any ianao.
Aza hadino mihitsy ny momba ny ambony ka hatrany ambany aretina. Angamba misy rakitra sasany manimba eo amin'ny rafitrao. Ny rakitra lehibe kokoa toy ny atiny hita maso dia mety hampihena ny hafainganam-pandehanao. Noho izany, mety te hampihena ny fisieo amin'ny tranokalanao ianao. Ny sary, doka-tekinika, ary isa ny endri-tsoratra no tena meloka amin'izany.
Mianara momba izany afa-po izay tokony hatao laharam-pahamehana. Ataovy eo an-tampon'ny pejinao izy ireo, izay tokony hampidirina aloha alohan'ny singa hafa ao amin'ny tranokala. Ity paikady ity dia afaka mampitombo ny hafainganana amin'ny enta-mavesatrao amin'ny fijerena ny traikefan'ny mpampiasa UX an'ny tranonkala.
2. Safidio ny famolavolana mamaly ho vonona amin'ny finday
Ny famolavolana finday mamaly dia sarotra ny mamorona. Mila manamboatra ny haben'ny efijery samihafa ianao. Saingy tsy mijanona hatreo ny fikatsahana. Ianao koa dia mila mandinika fironana sy sehatra finday hafa.
Azonao atao ny mifantoka amin'ny bokotra raha mora kokoa ny fivezivezena. Ireo menus na sokajy dia tokony ho mora tsindriana. Ny pejy tsirairay dia tokony hanome ny mpampiasa torolàlana mazava momba ny toerana halehany rehefa te hanatanteraka zavatra toy ny fampidirana ilay entana amin'ny sarety, fanafoanana ny fangatahana, na ny fizahana ny baiko.
Ny firafitry ny famolavolana dia tokony ho malefaka. Tokony handraisana ny fahaizany mandrafitra ny volavolan-dahatsoratra, sary ary habe amin'ny horonan-tsary. Tadidio fotsiny fa tokony hatao laharam-pahamehana ny vahaolana finday. Ny pejy tsy manam-petra, lahatsoratra lehibe, ary atiny hita maso malalaka dia fivarotana tanteraka ho an'ireo mpitsidika anao.
3. Esory ireo Pop-ups sy horonan-tsary tsy ilaina ho an'ny mpampiasa finday
Ireo pop-ups sy doka horonantsary pesky ireo dia mety hanimba ny endrikao amin'ny Internet amin'ny ankapobeny, ary koa ny tahan'ny fiovam-ponao koa.
Na tsara toy inona aza ny volanao tranonkala, ny fampiharana pop-up be loatra dia hampihena be ny UX sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, izay mitarika fihenam-bidy ambany kokoa.
Raha tokony hiteraka firaka bebe kokoa dia mety hahazo taha ambony ianao ary hampihena ny fifamoivoizana. Raha ny marina, araka ny fanadihadiana natao ny Fiaraha-miasa amin'ny doka tsara kokoa, ny sasany amin'ireo karazana doka finday ankahalaina indrindra dia ireto manaraka ireto:
Horonan-tsary mandeha ho azy
Sarimiaina izay mirehitra hatrany
Doka manana fanisana isa alohan'ny fanilihana azy
Pejin-tranonkala finday manana doka mihoatra ny 30%
4. Ataovy mora kokoa amin'ny alàlan'ny Checkout Seamless
Tsy fahita firy ny fandaozana ny Checkout. Ny antony dia mitoetra ao amin'ny endrika tsy dia tsara an'ny pejy fizahana. Betsaka ny anton-javatra mahatonga ny mpanjifa mamela ny vokatra ao anaty harona fiantsenana nefa tsy mividy azy ireo akory. Matetika izy ireo dia tsy mahita ny bokotra mety hanery, na ny pejy dia sarotra loatra hamakivakiana.
Noho izany, ny pejy fizahana dia tokony tazonina madio sy minimalistic. Ny habakabaka fotsy sy ny fanaparitahana ireo dingana amin'ny pejy maro dia hanampy. Ny bokotra dia tokony hampandeha ny mpanjifa amin'ny filaharan'ny fizotry ny fizahana.
5. Manampia endrika fandoavam-bola hafa
Ny dingana fizahana dia ny fotoana ahafahanao manova ny mpitsidika ho mpanjifa tena izy. Noho izany dia tokony hohatsaraina izy io ho an'ny fifanakalozana mirindra sy ny fiovam-po ambonimbony kokoa.
Aza manantena fa hampiasa PayPal ny mpanjifanao rehetra handoavana ny baikony.
Ny orinasam-barotra e-varotra dia tokony handinika ny fahafaha-manova hatrany. Ankoatra ny carte de crédit na fandoavam-bola, mety te hanampy Apple Pay ianao, ary mandoa ny fantsom-pandoavam-bola ao amin'ny tranokalanao Google. Mipoitra tsikelikely ny kitapom-bola nomerika, izay tokony hitan'ny orinasam-barotra e-commerce mialoha sy araraotiny.
Raha mbola manjakazaka eran'izao tontolo izao ny finday avo lenta, dia tokony hianatra hifanaraka ny orinasa.
Betsaka ny fotoana voatahiry ao amin'ny fantsona finday. Ny hany ilaina dia ny endrika tsara sy ny fanatsarana hatrany. Tazomy ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fandaminana ny zava-drehetra.
Fa misy koa fomba tsara kokoa amin'ny fanaovana zavatra. Afaka mahazo fanampiana amin'ireo matihanina ianao. Ny fanatsarana finday dia mety ho mafy, saingy amin'ny alàlan'ny famolavolana tranonkala Derry dia afaka manao azy rehetra amin'ny fahadiovana ianao. Fanampin'izay, afaka manangona fotoana ianao hifantohana amin'ny lafiny hafa amin'ny orinasanao.
Tags: horonan-tsary mandeha ho azyfiaraha-miasa ho an'ny doka tsaratsara kokoadoka countdownfiovan'ny findayfanatsarana findayfinday popuphafainganam-pandeha findayhafainganam-pandehan'ny tranonkala findayfizahana tsy misy tohika